Nwere ike SnapChat Bụrụ Nzọụkwụ Ọzọ na Njem Onye yerzụ Gị?
N'ọtụtụ ụzọ, nke a dabere na onye onye ahịa gị bụ na ihe njem ha bụ.
Onye ọ bụla maara banyere Snapchat n'oge a, nri? Onwere onye no na ochichiri na onye a? Ọ bụrụ otu a, lee ihe ị ga - achọ ịma… Ọ bụ otu n’ime netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta ama ama n’etiti afọ 16 - 25, ọ bara uru ijeri $ 5, na ọ dị ka ọ nweghị onye na-akpata ego ya.
Ugbu a, akụkụ nke a bụ site na imewe. E nwere nanị mpaghara ole na ole ị nwere ike ịkpọsa na Snapchat, ha niile dịkwa egwu. Can nwere ike ịkwụ ụgwọ maka mgbasa ozi na "Live Akụkọ," na nnoo nweta a 10 abụọ tupu mpịakọta ntụpọ na ọrụ nwere ike dị nnọọ pịa site na-enweghị echere ọlị. Can nwere ike kpọsaa na atụmatụ "Discover" ọhụrụ ha, nke dị njikere igbochi ụzọ akụkọ na saịtị ntanetị sitere na CNN na Comedy Central hapụ ọdịnaya ha. Nhọrọ ndị a dị njọ ọ gwụla ma ịchọrọ mmụba dị oke ọnụ ma na-enweghị atụ na mmata.
Ajụjụ nke ọ dịghị onye na-ajụ, n'agbanyeghị, kedu ka anyị ga - esi tinye Snapchat n'ihe anyị mara arụ ọrụ ugbu a? Ọtụtụ ndị mmadụ na-ede akwụkwọ mmekọrịta mmekọrịta dị ka ihe na-emekarị (ndudue) na ọtụtụ ndị ọzọ egwu nke igwu egwu na ntaneti n'ihi na ha aghotaghi ya (nnukwu mmeghe). Nke a bụ ihe kpatara ndị mmadụ ji akwụ ụmụaka nzuzu dịka m ịbịa were egwu teknụzụ ndị a dị egwu, m wee Akpata oyi wụrụ na ọtụtụ mmadụ achọpụtabeghị ihe ha nwere na mkpịsị aka ha - n'ụzọ nkịtị.
Enwere m ike iche maka ihe dị ka ụlọ ọrụ iri na abụọ - gụnyere ndụ abalị, ụlọ nri, na ụlọ ahịa ndị ọzọ - ndị nwere ike irite uru dị ukwuu site na itinye akwụkwọ free ọcha nke Snapchat n'ime usoro ahia ha, o we banye na Baibul nke otutu ndi ahia ahia di iche-iche na-agbaso journey njem nke onye nzuko ahia.
Omenala Ndị Na-azụ Ndị Omenala
Y’oburu n’inwe uche guru iguta Martech Zone, Eji m n’aka na ị ma ihe niile gbasara njem ndị omenaala. A na-egosiputa ahụmịhe nke ndị ahịa na ihe nlere a dịka mkpebi ezi uche dị na ya, nke onye na-eme mkpebi nwere ọgụgụ isi mere. Nke mbu, onye ahia gha amata na ha nwere nsogbu, ha amalite igba nyocha, mgbe ahu ha muta ihe banyere ihe nghari gi, ha zuta ya, mgbe ahu ha ghoro onye na akwado ya. O yiri ka ọ dị ọcha, dị mfe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ dị ọcha ma dị mfe…
Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ. Na oghere B2B, ọ bụ dị nnọọ dị mkpa. Na oghere B2C ọ bụ mgbe ụfọdụ dị mkpa, mana ọ dị ka usoro isi mkpịsị aka karịa usoro. Yabụ kedu ka ị ga - esi hazie usoro isi mkpịsị aka iji dabara Snapchat n'ime usoro ahụ?
Gbazi njem maka ọgbọ ọzọ
Ka anyị bido n’ihe gbasara ọgbọ. Adịghị m ebe a ka m dee ụdị omume ọzọ na otu esi azụ ahịa na ọtụtụ puku afọ. Ndi dere ndi kariri ighota anyi ma obu ndi pere aka ighota ahia bu nke edeputara ndi a, enweghi m mmasi na ya. N'ikwu ya, enwere nnukwu ọdịiche dị n'agbata otu ndị na-eto eto si eri ihe ọmụma na otu ụdị ndị ahịa bea ha na-eri ihe ọmụma.
Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ puku afọ n'ozuzu ya bụ ndị ama ama na enweghị ntụkwasị obi na mgbasa ozi. Nke ahụ bụ oke iwepụ oke na ọtụtụ mmadụ kwụsị ebe ahụ. Ihe onye ọ bụla na-ajụ bụ Kedu puku afọ anyi na ekwu okwu?
Ndị maara ihe nke nwere ego kachasị atụkwasị ntụkwasị obi na mgbasa ozi, mana ha hụrụ nyocha na ha hụrụ n'anya n'ezie ụdị ndị na-anwa ịkwado soro ha. Ha tolitere na ngụkọta nke ihe ọmụma mmadụ na mkpịsị aka ha ma jiri ya dozie ebe a na-a barụ mmanya, chọpụta ọnya akpịrị ha ma kpebie ebe ha ga-esi nweta ego ha. Maka otu a, ihe ngosi mmekọrịta mmadụ na eze bụ eze, ihe ọ bụla nke yiri ka ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-efunahụ ya.
Ya mere, nke a na - eweta ajụjụ dị oke mkpa, kedu ka m ga - esi wee nwee ike ịkwalite ikpo okwu anaghị akwado ndị mgbasa ozi ka ha zụọ ahịa na igwe mmadụ nke achọghị ka ere ya?
Nchọpụta Snapchat Na-agabiga Snapchat Discover
N'ime izu ole na ole gara aga, ndị otu m na Miles Design anọwo na-anwale na ahịa Snapchat, na anyị achọtala ezigbo ohere dị na ikpo okwu nke nwere kpamkpam n'efu ma nwee ikike ịme ka azụmahịa, ọ bụghị naanị akara ngosi.
Dị ka ihe atụ, were ya na ị bụ onye mmanya na-adọgbu onwe gị nke ime ka ndị na-eto eto dị afọ iri asatọ bata n'ọnụ ụzọ. Enwere otutu azịza na ezi-okwu banyere nsogbu a, gụnyere ọ greatụ drinkụ ọ drinkụ drinkụ ọ ,ụ drinkụ, ehihie na abalị, egwu egwu, wdg. Gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwọ ndị mmadụ ọnụ na ebe gị ka ihe mkpali gị wee kpalie ịzụta?
Ihe ole na ole pụrụ iche gbasara Snapchat dịka netwọkụ mmekọrịta, gụnyere geo-filters. Ugbu a, Snapchat agaghị ekwe ka ị mepụta geo-nyo maka azụmahịa gị, mana ha ga- ka ị mepụta geo-myọ maka mpaghara gị. Usoro a bụ n'efu ma na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi, nke pụtara na oge ọ bụla mmadụ rutere n'olu gị nke ọhịa, ha nwere ike iji gị geofilter mgbe Snapchatting ndị enyi gị, na-emecha na-ebugharịkwu okporo ụzọ gị na agbata obi gị, na olile anya, ụlọ mmanya gị. Jikọta nke a na nkwalite (Sọọ anyị foto na geofilter wee banye iji merie ihe ọ freeụ drinkụ na-akwụghị ụgwọ, wdg) ma ị nwere ike bụrụ onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi juggernaut yana ezigbo igwe mmadụ gị n'ihe gbasara ọnwa.
Anọghị m naanị na nke a, kwa. Snapchat nwere n'ezie jiri Geofilters zuo ndị injinia na Uber, na m na echiche bụ na ha agaghị akwụsị ebe ahụ. Enwere ọtụtụ ngwa maka teknụzụ a, ị ga-adị njikere ịnwale ya.
Ihe a niile na-agbadata njikọ aka. Snapchat adịghị iche, ọ bụ naanị ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ n’inye ndị ọrụ nnukwu ahụmịhe na ụzọ dị mma iji jikọta ma tinye aka, ị ga-emeri. Maka ọtụtụ ụdị B2C na-achọ itinye aka na ndị na-eto eto, nke a bụ nnukwu nhọrọ… Gini mere ha ji tụọ ya egwu?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ikori nkata gbasara azụmaahịa, teknụzụ, ma ọ bụ ọkpara ha, ahịa Tech, enwere m mmasị ikwu okwu. Debe mkparịta ụka na-aga na Twitter ka m marakwa ihe ozo ichoro igu!
Tags: nke kachasị njọmarketingimewe kilomitaMillennialssnapchatsnapchat ahia